Fitsipika momba ny tsiambaratelo | Fiverenana mieritreritra fahatsiarovan-tena - Tarehimarika
Mampiasa Ezoic izahay hanomezana tolotra manokana sy an-tserasera eto amin'ity tranonkala ity, satria ny politikam-pahafahana Ezoic toy izany dia manan-kery ary azo zahana amin'ny fipihana eto .
Eto amin'ny www.shoplunachics.com, manan-danja indrindra aminay ny tsiambaratelon'ny mpitsidika anay. Ity antontan-taratasy politika momba ny tsiambaratelo ity dia manisy antsipiriany ny karazana fampahalalana momba anao manokana izay voaray sy angonin'ny www.shoplunachics.com ary ny fampiasana azy.
Tahaka ireo tranonkala maro hafa, www.shoplunachics.com dia mampiasa fisie log. Ny fampahalalana ao anaty fisie log dia misy ny adiresy protokol internet (IP), ny karazana browser, Internet Service Provider (ISP), ny daty / ny fotoana, ny pejy fanondroana / fivoahana, ary ny isan'ny tsindry handinihana ireo fironana, hitantanana ilay tranonkala, hanarahana ny hetsiky ny mpampiasa manodidina ny tranokala, ary manangona fampahalalana momba ny demografika. Ny adiresy IP, ary ny fampahalalana hafa toa izany dia tsy mifandray amin'ny fampahalalana izay azo fantarina manokana.
Ny sasany amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra dia mety mampiasa cookies sy jiro web amin'ny tranokalanay. Ny mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra dia misy ny Google Adsense.
Ireo mpivarotra ankolafy fahatelo, ao anatin'izany ny Google, dia mampiasa cookies handefasana doka mifototra amin'ny fitsidihan'ny mpampiasa mialoha ny tranokalanao.
Ny fampiasan'i Google ny cookie DoubleClick dia mamela azy sy ireo mpiara-miasa aminy handefa doka amin'ny mpampiasa anao izay mifototra amin'ny fitsidihany ireo tranokalanao sy / na tranokala hafa manerana ny Internet.
Ireo mpampiasa dia afaka misafidy ny tsy hampiasa ny cookie DoubleClick ho an'ny dokambarotra mifototra amin'ny fahalianana amin'ny fitsidihana Fikirana doka .
www.shoplunachics.com dia tsy mahazo miditra na mifehy ireo cookies ireo izay ampiasain'ny mpanao dokambarotra ankolafy fahatelo.
Tokony hijery ny politika manokana momba ny fiainana manokana ataon'ireto mpizara doka fahatelo ireto ianao raha mila fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fomba fanaony ary koa ny torolàlana momba ny fomba hialana amin'ireo fomba fanao sasany. Ireo politika momba ny tsiambaratelo ireo dia voatanisa ao amin'ny politikan'ny tsiambaratelon'ny Ezoic izay azonao jerena fipihana eto .
Ny politika momba ny tsiambaratelo www.shoplunachics.com dia tsy mihatra amin'ny, ary tsy afaka mifehy ny hetsika ataon'ny mpanao dokam-barotra hafa na tranokala hafa izahay.
Izahay dia namela fiasa iray miaraka amin'ny sehatra Google Analytics izay manome fampahalalana demografika vitsivitsy ho an'ny sasany amin'ireo mpampiasa anay toy ny taona, ny miralenta ary ny zavatra mahaliana. Tsy mahazo mombamomba ny mombamomba ny mpampiasa tsirairay afa-tsy ny fampahalalana momba ny tobin'ny mpitsidika amin'ny ankapobeny izahay. Raha te hiala amin'ny fanarahana ny Google Analytics ianao dia azonao atao izany amin'ny fitsidihana ny Tranonkala Google eto .
Misoratra anarana amin'ny mailaka Newsletter
Rehefa misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo taratasim-baovao ao amin'ny www.shoplunachics.com ianao dia hizaha ny adiresy mailaka ataon'ny mpiara-miasa aminay Pepo Campaigns. Raha te hamaky bebe kokoa momba ny fomba fitehirizany ny angon-drakitrao, azafady mba jereo ny politikany manokana momba ny fipihana eto .
Azonao atao ny mangataka aminao mba hanaisotra ny mailakao amin'ny lisitry ny mpanjifa mba tsy hahazoanao ny mailakay intsony amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy tsy hisoratra anarana izay hita eo ambanin'ny mailaka rehetra alefanay. Raha tsy izany, valio ny mailaka miaraka amin'ny teny STOP ary hesorinay amin'ny lisitry ny mpisoratanao ny mailakao.
Izahay dia tsy hivarotra ny angon-drakitrao amin'olon-kafa mihitsy, fa miaro ny zonao handefa anao ny tolotra marketing amin'ny antoko fahatelo.
Facebook, Twitter, ary bokotra tambajotra sosialy hafa
Ity tranonkala ity dia manome bokotra fizarana ho an'ny tambajotra sosialy malaza indrindra anisan'izany ny Facebook, Twitter, ary Pinterest. Ny fipihana ny iray amin'ireo bokotra ireo dia mamela anao hizara ilay pejy izay tsidihinao ankehitriny ao amin'ny kaonty tambajotra sosialy. Rehefa manindry bokotra ianao dia hoentina any amin'ny tambajotra sosialy. Izahay dia tsy manangona na mandrindra angona manokana amin'ny alàlan'ireto bokotra ireto.
zavatra horesahina amin'ny olona
inona no dikan'ny hoe fahatsapana ny zony
ny fomba hahitana fiainana tsara kokoa ho anao
maninona ny olona no manambany anao
ahoana no hahafantarana raha manafina ny fihetseham-pony ny lehilahy